Accueil > Gazetin'ny nosy > Manandriana: Nanolotra fitaovana hiadiana amin’ny dahalo ny depiote
Manandriana: Nanolotra fitaovana hiadiana amin’ny dahalo ny depiote
Tamin’ny asabotsy faha 23 desambra 2017 lasa teo dia nanolotra fitaovana maromaro hiadiana amin’ny asan-dahalo ny depiote Andrianjanahary Fanomezantsoa izay voafidy tao Manandriana ao amin’ny faritra Amoron’i Mania. Môtô tsy matoho-dàlana miisa 13 ho an’ny ben’ny tanàna, telefaonina na finday ho an’ny sefom-pokontany rehetra ao anatin’ny distrika. Nampiana “plaque solaire” ho an’ny biraon’ny kaominina ary radio ho an’ny fokontany mba hahazoany mihaino vaovao. Nomena ny fitaovana koa ny mpitandro ny filaminana dia ny zandary sy ny pôlisy ary ny DAS (Détachement autonome de sécurité) izay miasa any amin’ity distrika ity.
Nambaran’ny depiote Andrianjanahary Fanomezantsoa fa ny hiadiana amin’ny asan-dahalo izay mahazo vahana ao amin’ny distrikan’i Manandriana no anton’izao hetsika izao. In-telo isan-kerinandro no tsy maintsy misy asan-dahalo ao amin’ny kaominina iray hoy ihany ny depiote ity ka tsy maintsy sorohina izany.
Tao Anjoma Nakona no nanaovana ity lanonana ity.
Ny alatsinainy faha 25 desambra 2017 teo nefa dia omby miisa 150 no lasan’ny dahalo tao amin’ny kaominina Ambatomarina. Ombin’ny mpanao dabokandro avy any Menabe iny izy io. Tamin’ny 10 ora antoandro no raikitra ny ady teo amin’ny mpandranto ireto sy ny dahalo. Nahatratra 40 lahy mahery ny dahalo izay mirongo fiadiana mahery vaika toa ny basy kalaky. Na dia tonga aza ny zandary dia tsy nitsoaka ny dahalo ka hatramin’ny fotoana nanoratanay dia mbola mifanafika ny roa tonta.